टस हारेर दिल्ली डेयडेविल्स व्याटिङ गर्दै, सन्दीप प्लेइङ ११ परे ? को-को परे ? - Everest Dainik - News from Nepal
टस हारेर दिल्ली डेयडेविल्स व्याटिङ गर्दै, सन्दीप प्लेइङ ११ परे ? को-को परे ?
काठमाडौं, चैत्र २५ । आइपीएलको ११ औं संस्करणको दोस्रो खेलमा आज दिल्ली डेयडेविल्स र किंग्स इलेवन पंजाब भिड्दै छन् ।
मोहालीको आइएस बिन्द्रा स्टेडियममा हुने खेलमा किंग्स इलेवन पंजाबले टस जितेर बलिङ गर्ने निर्णय गरेको छ । आइपीएल क्रिकेटमा दिल्ली डेयर डेभिल्समा आवद्ध नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछानले पहिलो खेलमा मैदान उत्रिन नपाउने भएका छन् ।
आजको खेलमा रविचंद्रन अश्विनले पहिलो पटक पंजाब टीमको कप्तान गर्दै छन् । त्यस्तै दिल्लीका लागि पनि गौतम गंभीरले पहिलो पटक कप्तानी सम्भाल्दै छन् ।
गम्भीर यसअघि सन २०११ देखि २०१७ सम्म लगाता कोलकाता नाइटराइडर्सको कप्तान थिए । गम्भीरको कप्तानीमा कोलकाता नाइटराइडर्स दुई पटक च्याम्पीयन बनिसकेको छ ।
पञ्जावविरुद्ध मैदान उत्रिने दिल्लीको टिमः
गौतम गम्भीर (कप्तान) कोलिन मुन्रो, जैसन रोय, ऋषभ पन्त, श्रेयर अय्यर, क्रिश मोरिश, विजय शंकर, अमित मिश्र, मोहमद शामी, ट्रेन्ठ बोल्ट र शहबाज नदिम
ट्याग्स: IPL, दिल्ली डेयडेविल्स